पवित्र आत्माको व्यक्तित्व र कार्य – Word of Truth, Nepal
पावल एउटा पीडादायी (“काँडा”) शारीरिक (“शरीरमा”) रोगले ग्रस्त थिए। शरीरमा रहेको उक्त काँडा आफूबाट हटोस् भनी पावलले प्रभुलाई _______ पटक विन्ती गरे तर परमेश्वरले सोअनुसार गर्नुभएन। परमेश्वरले यसभन्दा उत्तम कार्य गर्नुभयो। उहाँले पावललाई आफ्नो अ_________ प्रशस्त छ भन्ने कुरा सिकाउनुभयो, परमेश्वरको अनुग्रहले उनलाई त्यस्तो शारीरिक कष्ट समेत सहन सक्ने क्षमता दिन्छ भन्ने कुराको बोध गराउनुभयो। आफ्नो सर्व-पर्याप्त अनुग्रहको बोध गराउन कहिलेकाहीँ परमेश्वरले दुःख-बिमार वा पीडा आउन दिनुहुन्छ।
“अब उसो पानी मात्र पिउने नगर, तर तिम्रो पेटका लागि, साथै घरीघरी भइरहने तिम्रा बिमारीहरूका कारणले अलि-अलि दाखमद्य प्रयोग गर।” तिमोथीको पेटको कमजोरी थियो जसको कारण उनी बारम्बार बिरामी पर्ने गर्थे। पावलले उनलाई कुनै चङ्गाइकर्ताकहाँ जान सल्लाह दिएनन्, न ता उनलाई उनका शारीरिक कमजोरीहरू पाप वा विश्वासको कमीका कारण हुन् भने। पावलले केवल एउटा सामान्य औषधी उपचारको सल्लाह दिए।
[पावलले तिमोथीलाई मात लाग्ने रक्सी नभएर अङ्गुरको रस पिउनलाई सल्लाह दिएको हुन सक्छ भन्ने यहाँ देखिन्छ। व्याकरणका विद्वान आथनेयस (Athenaeus, 280 AD) ले यसरी लेखेका छन्: “उसले गुलियो दाखरस लेओस्, पानीसँग मिसाएर वा गरम गराएर, विशेष गरी प्रोटोपोस भनिने खाले, त्यो गुलियो लेस्बियन गलुकस, पेटको लागि लाभदायक हुने भएकोले; किनकि गुलियो दाखरस [oinos] ले टाउकोलाई भारी बनाउँदैन” (Athenaeus, Banquet 2,24). प्राचीन लेखोटहरूमा पेटको समस्याहरूका लागि कण्वीकरण नभएको (unfermented) दाखरस प्रयोग गर्न सिफारिश गरिन्थ्यो भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरण हो।]
“एरास्टस कोरिन्थमा रहे; तर ट्रोफिमसलाई मैले मिलेटसमा बि________ अवस्थामा छोडेको छु।” ट्रोफिमसको आत्मिक समस्या (पाप, विश्वासको कमी) थियो भन्ने त्यहाँ कुनै सङ्केत छैन, तर उनको एउटा शारीरिक समस्या भने थियो, तर पावलले उनलाई चङ्गाइ गरेनन्। यस जीवनमा कहिलेकाहीँ आफ्ना सन्तानहरू बिरामी हुनु नै परमेश्वरको इच्छा हुन्छ, तर आउनेवाला जीवनमा भने कहिल्यै त्यसो हुन्न (प्रकाश २२:४)
कतिपय क्यारिज्म्याटिक व्यक्तिहरूको धारणाअनुसार, यदि तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ भने तपाईं परमेश्वरको इच्छाभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। उदाहरणका लागि, केनेथ हेगन जुनियर (Kenneth Hagan Jr.) लेख्छ्न्: “परमेश्वरको इच्छा नै आफ्ना सन्तानहरू पूर्ण स्वस्थतामा जिऊन् भन्ने हो भन्ने मेरो विश्वास हो…आफ्ना सन्तानहरूलाई चङ्गाइ गर्नु सधैं नै परमेश्वरको इच्छा हो।” [मलाई जुलाई १६, १९८७ मा केनेथ हेगनद्वारा लेखिएको पत्रबाट] यस्ता व्यक्तिहरूलाई केही प्रश्नऊ गर्न हामीलाई कर लाग्छ: के तपाईंहरूमध्ये कसैकसैले चश्मा लगाउनुहुन्छ (केनेथ हेगनले त लगाउँछन्)? के तपाईंहरूमध्ये कसैकसैलाई रूघाखोखी लाग्ने गर्छ? के तपाईंहरूमध्ये कोहीले सिटामोल वा अन्य दुखाइ हटाउने ने ओषधी खाने गर्नुहुन्छ? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नत त, के तपाईंहरू मर्नुहुन्छ?
२) के नयाँ नियमले “सुख-समृद्धिको सुसमाचार” (PROSPERITY GOSPEL) को शिक्षा सिकाउँछ?
यो शिक्षा आज प्रायः सुनिने अति प्रचलित र आकर्षक सन्देश हो, अर्थात् यदि तपाईंले ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभयो भने तपाईंलाई स्वस्थलाभ र सम्पत्तिलाभ हुनेछ। यसको मतलब तपाईंलाई शारीरिक स्वस्थलाभ र भौतिक उन्नति हुनेछ। तपाईंको शरीर रोगबिमारबाट स्वतन्त्र हुनेछ र तपाईंको बैंक खाता भरिभराउ हुनेछ। तर वास्तवमा यस प्रकारको शिक्षाबाट साँच्चै आर्थिकलाभ उठाउनेहरू चाहिँ ती झूटा शिक्षकहरू मात्र हुन्छन्, अर्थात् “सुख-समृद्धिको सुसमाचार” का प्रचारकहरू।
ख्रीष्टमा भरोसा गर्नेहरूको आत्मिक उन्नति हुन्छ भन्ने कुरा साँचो हो। उनीहरू आत्मिकमा सफल हुन सक्छन् र आफ्नो प्राणमा स्वस्थलाभ पाउन सक्छन् (२ यूहन्ना २)। उनीहरूले ख्रीष्टमा पाइने हरेक आत्मिक _____________ उपभोग गर्न सक्छन् (एफेसी १:३)। उनीहरू उहाँमा ध___________ हुन सक्छन् (२ कोरिन्थी ८:९)। तर परमेश्वरले आफ्नो सन्तानहरूलाई यस जीवनमा हट्टाकट्टा शारीरिक स्वास्थ्य र भौतिक, आर्थिक उन्नतिको कहिल्यै प्रतिज्ञा गर्नुभएन। वास्तवमा पूरै नयाँ नियमको शिक्षाअनुसार परमेश्वरका जनहरू त दुःख र कष्ट भोग्नेहरू हुनेछन्, काटिन लगिइरहेका भेडाहरूझैं हुनेछन् (रोमी ८:१८,३५-३६) भन्ने छ। उनीहरूले संसारबाट घृणा र सतावट पाउनेछन् (यूहन्ना १५:१८-२०)। संसारमा उनीहरूलाई सं________ र थिचोमिचो हुनेछ (यूहन्ना १६:३३)। ख्रीष्टमा भक्तिपूर्वक जिउने सबै नै सतावटमा ___________ (२ तिमोथी ३:१२) र प्रत्येक ख्रीष्टियनले ख्रीष्टको असल सिपाहीलेझैं दुःख उठाउनुपर्छ (२ तिमोथी २:३)। सुख-समृद्धिको सुसमाचारको विरुद्धमा सबभन्दा राम्ररी छोटकरीमा व्यक्त गरिएको पावलको जवाफ सायद १ थेस्सलोनिकी ३:३-४ नै हो —”यी ___________द्वारा कोही पनि ढलपल नहोस् भनेर; किनकि तिमीहरू आफै जान्दछौ, हामी यसैका निम्ति _____________ छौं। किनकि साँच्चै तिमीहरूसँग रहँदा, ‘हामीले __________ भोग्नुपर्छ’ भनी हामीले तिमीहरूलाई पहिल्यै भनेका थियौं; र यस्तै भयो पनि, अनि तिमीहरूले पनि जान्दछौ।”
संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डियाना राज्यको एउटा विषम क्यारिज्म्याटिक समूह (“द ग्लोरी बार्न”) ले विश्वासीहरू कहिल्यै डाक्टरकहाँ जान हुन्न बरु चङ्गाइ पाउन परमेश्वरमा भरोसा राख्नु पर्छ भनेर सिकाए। बच्चा जन्माउने समयमा डाक्टर वा नर्सको मदत नपाएको हुनाले कोही गर्भवति महिलाहरूलाई साह्रो पर्योन र उनीहरूका बच्चाहरू मरे। समस्या अझ जटिल बन्यो जब यस समूहका सदस्यहरूले परमेश्वरसित यी मरेका बच्चाहरूका निम्ति प्रार्थना गर्न थाले। स्थानीय समाचार माध्यमले यी घटनाहरूलाई सार्वजनिक बनाइदिए। फलस्वरूप ख्रीष्टको नामलाई ठूलो शर्ममा पार्ने काम भयो। गलत शिक्षाको कारण गलत अभ्यास भएको थियो।
“तर येशूले त्यो सुनेर तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “निरोगीहरूलाई होइन, तर ____________लाई ________________ खाँचो पर्दछ” (मत्ती ९:१२)।
निरोगी र स्वस्थ व्यक्तिहरूलाई डाक्टर वा वैद्यको खाँचो पर्दैन। यसको तात्पर्य रोगीलाई डाक्टर चाहिन्छ नै भन्ने हो। भन्ने हो भने, सुसमाचारको एउटा पुस्तक समेत लेख्नेन पावलका एक सहकर्मी एक डाक्टर थिए, “प्रिय वैद्य _________ र डेमासले तिमीहरूलाई सलाम पठाउँदै छन्” (कलस्सी ४:१४)।
“अनि येशू तिनीहरूका सभाघरहरूमा शिक्षा दिँदै, राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै र मानिसहरूमा भएका सबै प्रकारको रोग र सबै किसिमको शारीरिक दुर्बलता निको पार्दै सारा गालीलभरि घुम्नुभयो। अनि उहाँको कीर्ति सिरियाभरि फैलियो; र किसिम-किसिमका रोग र पीडाहरूले सताइएका _______ बिरामी मानिसहरूलाई, दुष्ट आत्मा लागेकाहरू, छारे रोग लागेकाहरू र पक्षघात भएकाहरूलाई तिनीहरूले उहाँकहाँ ल्याए; अनि उहाँले तिनीहरूलाई _________ पार्नुभयो” (मत्ती ३:२३-२४)।
प्रभुले आफ्ना चेलाहरू (प्रेरितहरू) लाई “_________ रोग र हरेक शारीरिक _____________ निको पार्ने अधिकार दिनुभयो” (मत्ती १०:१)।
“अनि परमेश्वरले पावलका हातद्वारा विशेष प्रकारका सामर्थ्यका कामहरू गर्नुभयो; यहाँसम्म कि उनको शरीरबाट रुमालहरू वा गम्छाहरू बिरामीहरूकहाँ लगिन्थे, र ________________ तिनीहरूलाई छोड्थे, र दुष्ट आत्माहरू तिनीहरूबाट निस्कन्थे” (प्रेरित १९:११-१२)।
५) के आधुनिक “चङ्गाइकर्ताहरू” (Faith Healers) ले चङ्गाइ गर्न सक्छन्?
मञ्चबाट ओर्लँदै गरेका “चङ्गाइको दाबी” गर्नेहरूमध्येबाट अनुपरीक्षण (follow-up study) मा सहभागी हुन चाहने प्रत्येकको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर र रोगको विवरण टिपोट गर्न मैले दुईजना कानूनी सहायकहरूलाई खटाएको थिएँ। ८२ जनाको नाम मिल्यो। कार्यक्रमको केही हप्तारपछि, आइतवार जुलाई १४ का दिन मिनियापोलिस शहरमा आउन र आफ्नो अनुभव बताउन सूचीमा नाम भएको हरेकलाई पत्र पठाएर निमन्त्रणा दिइयो। २३ जना उपस्थित भए। मैले उनीहरू प्रत्येकसित त्यसपछिका महिनाहरूमा व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता लिनका निमित्त बन्दोबस्त गरें।
६) आधुनिक “चङ्गाइकर्ताहरू” ले आफ्ना असफल प्रायसहरूको स्पष्टिकरण कसरी दिन्छन्?
मत्ती १२:१५ मा ठूला-ठूला भीड प्रभु येशूका पछि लागे र, उनीहरूसँग विश्वास होस् या नहोस्, “उहाँले ती ___________ निको पार्नुभयो”। प्रेरित ५:१६ मा रोगीहरूको एउटा ठूलो जमातलाई प्रेरितहरूकहाँ ल्याइएको थियो, “अनि तिनीहरू ________ निको पारिए”। विश्वासको शर्तबिना नै यी चङ्गाइहरू सबैलाई प्राप्य_ थियो। एउटै बिरामी निराश भई फर्कनुपरेन।
प्रेरित २०:९-१२ मा पावलले एउटा व्यक्तिलाई सबैभन्दा गम्भीर रोगबाट चङ्गाइ गरेको पाउँछौं, अर्थात् मृत्युबाटै। यहाँ एक युवा वास्तवमै मरिसकेका थिए। निश्चय नै मरिसकेको व्यक्तिले विश्वास गर्न सक्दैन! “उसको विश्वासको कमीले गर्दा मैले उसलाई मृत्युबाट बिउँताउन सकिनँ” भनी कुनै आधुनिक चङ्गाइकर्ताले भन्नु त हास्यास्पद हुन्छ। यसले एउटा रोचक प्रश्नु उब्जाउँछ: यदि आधुनिक चङ्गाइकर्ताहरूसित ख्रीष्ट र प्रेरितहरूसितको जस्तै चङगाइ-शक्ति छ भने, किन उनीहरू मरेकालाई बिउँताउँदैनन्?
“अनि जब त्यस ठाउँका मानिसहरूले उहाँलाई चिने, तब तिनीहरूले वरिपरिका सबै इलाकाहरूमा पठाए, र सबै बिरामीहरूलाई उहाँकहाँ ल्याए; अनि उहाँको वस्त्रको किनार मात्र भए पनि छुन पाऔं भनी तिनीहरूले उहाँलाई विन्ती गरे; अनि जतिले छोए, ती एकदम ___________ भए” (मत्ती १४:३५-३६)।
“अनि उहाँकै नामले, उहाँको नाममाथि राखिएको विश्वासद्वारा तपाईंहरूले देख्नु भएको र चिन्नुभएको यी मानिसलाई बलियो बनायो; अनि उहाँद्वाराकै विश्वासले यिनलाई तपाईंहरू सबैजनाका सामु यो __________ स्वास्थ्य दिएको छ” (प्रेरित ३:१६)।
“तर यो कुरा थाह पाएर येशू त्यहाँबाट निस्कनुभयो; अनि ठूला-ठूला भीड उहाँका पछि लागे; अनि उहाँले ती __________ _________ पार्नुभयो” (मत्ती १२:१५)।
“अनि चारैतिरका शहरहरूबाट बिरामी मानिसहरूलाई र अशुद्ध आत्माहरूद्वारा सताइएकाहरूलाई लिएर एउटा भीड पनि यरूशलेममा भेला भयो; अनि तिनीहरू ________ निको पारिए” (प्रेरित ५:१६)।
“तब एकजना दुष्ट आत्मा लागेको, अन्धा र गुँगा मानिस उहाँकहाँ ल्याइयो; अनि उहाँले त्यसलाई निको पार्नुभयो, यहाँसम्म कि त्यस अन्धा र गुँगा मानिस बोल्यो र देख्यो पनि। अनि सबै मानिसहरू __________ परे, र भने: “के यहाँ नै दाऊदका पुत्र हुनुहुन्न र?” तर फरिसीहरूले यो सुनेर भने: “यस मानिसले दुष्ट आत्माहरूको शासक बेल्जेबुलद्वारा बिना दुष्ट आत्माहरू निकाल्दैन” (मत्ती १२:२२-२४)।
“अनि निको पारिएको मानिसलाई उनीहरूसँगै उभिरहेको देखेर तिनीहरूले यस कुराको विरोधमा ___________ भन्न सकेनन्… “यी मानिसहरूलाई हामी के गरौं? किनकि उनीहरूद्वारा साँच्ची नै एउटा प्रसिद्ध चिन्ह गरिएको छ, यो यरूशलेमका सारा बासिन्दाकहाँ प्रकट भएको छ; र यो हामी ___________ गर्न ‌____________” (प्रेरित ४:१४,१६)।
९) आधुनिक “चङ्गाइकर्ताहरू” का “आश्चर्यजनक” उपचारहरू कस्ता छन्?
पाङ्ग्रे मेचमा रहेका साह्रै निर्बल रोगीहरू पांङ्ग्रे मेचमै थिए। उनीहरू त्यहाँबाट निस्कँदै गर्दा आफ्ना अपाङ्ग बाल-बालिकाहरूलाई पाङ्ग्रे मेचमा गुडाउँदै एलभेटरतिर लग्दैगरेका बाबुआमाहरूको आँखामा मैले आँसु देख्दा मेरो मनमा यो देख्नर त क्याथरिन कूलम्यान पनि मसँगै त्यहाँ हुनुपर्ने भन्ने लाग्यो। आशा भङ्ग भएका ती रोगीहरू र बाबुआमाहरूले कति पीडा भोग्दै छन् भन्ने कुरा क्याथरिन कूलम्यानलाई वास्तवमा थाहै छैन भन्ने मलाई लाग्यो। उनलाई थाह होला भनेर मैले विश्वास गर्न सकिनँ। [William A. Nolen, M.D., “In Search ofaMiracle,” McCall’s Magazine, September 1974.]
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 22:29:592020-04-28 14:24:33चङ्गाइको वरदान
“उल्लेखनीय कुरा के छ भने अन्य भाषाहरूको वरदानलाई प्रेरित-पश्चातका अग्रजहरू (Post Apostolic Fathers) का कुनै पनि लेखमा उल्लेख गरिएको छैन, कतै त्यसको अलिकति छनक समेत पाइँदैन।” [John MacArthur, Jr., The Charismatics, p. 169.]
मार्कसले एउटी स्त्रीलाई [भन्छन्], “मबाट र मद्वारा कारिस (Charis) को दान प्राप्ते गर…”
४) “शेकरहरू” (Shakers) भनिने समूह ई सं १७४७ मा एउटा स्त्रीद्वारा शुरू भएको हो। शिक्षामा उनी गञ्जागोल थिइन्, र उनले विशेष गरी ख्रीष्टको बारेमा झूटा धारणाहरू अपनाएकी थिइन्। “भनिन्छ, शरीरलाई वशमा ल्याउनलाई, उनले अन्य भाषाहरूमा बोल्दै गरेका पुरूष र स्त्रीहरू नाङ्गै नचाउने अभ्यासको शुरूआत गरिन्।” [Charles Smith, Tongues in Biblical Perspective, pages 17-18.]
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 22:27:062020-04-28 14:24:33भाषाहरूको वरदान (ख)
क्यारिज्म्याटिक व्यक्तिहरूले प्रायः यो प्रश्न् सोध्ने गर्छन्। उनीहरूको यस प्रश्नएको तात्पर्य वास्तवमा यो हो — “के तपाईंले आत्माको बप्तियस्मा पाउनुभयो, अन्य भाषा बोल्ने जस्ता क्यारिज्म्याटिक अनुभव पाउनुभयो?”
हामी त्यस आधारभूत प्रश्न मा नै फर्कौं, “के तपाईंले पवित्र आत्मा पाउनुभयो?” बाइबलले दिने जवाफ के हो त? १ कोरिन्थी ६:१९-२० अनुसार कोरिन्थका सबै विश्वासीहरूभित्र, अँ, शरीरअनुसार हिँड्ने विश्वासीहरू (१ कोरिन्थी ४:१-३) भित्र समेत, पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो — “के यो तिमीहरूलाई थाह छैन? तिमीहरूको शरीर _________________________________________ हो, जो __________ भित्र हुनुहुन्छ, जसलाई तिमीहरूले परमेश्वरबाट पायौ, र तिमीहरू आफैका होइनौ।” यो प्रस्ट छ, तिनीहरूले जुन घडी मुक्ति पाए त्यही घडी नै उनीहरूले पवित्र पाएका थिए। ख्रीष्टमा हरेक विश्वासको सवालमा यही सत्य हो।
यूहन्ना ७:३८-३९ महत्त्वपूर्ण छ। पवित्र आत्मा पाउने विषयमा त्यहाँ जे भनिएको छ त्यसमा राम्ररी ध्यान दिनुहोस्। विश्वास गर्नेहरू नै पाउनेहरू हुन्। यदि तपाईंले ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईंले पवित्र आत्मा पाइसक्नुभएको छ। तसर्थ, चाबी प्रश्न “के तपाईंले पवित्र आत्मा पाउनुभयो?” भन्ने नभएर “के तपाईंले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभयो?” भन्ने हो (हेर्नुहोस् यूहन्ना १:१२)। तपाईंसँग ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने तपाईंसँग पवित्र आत्मा पनि हुनुहुन्छ!
“पवित्र आत्मा मभित्र वास गर्नुहुन्छ भनेर म कसरी जान्दछु?” क्यारिज्म्याटिक नवीकरण (Charismatic Renewal) को जवाफ छ — “पवित्र आत्माको बप्तिुस्माले अर्थात् एउटा यस्तो शक्तिशाली अनुभवले जसले यसको प्रापकलाई परमेश्वर वास्तविक हुनुहुन्छ भनेर विश्वस्त तुल्याउँदछ” (रिचार्ड कबीडो, दि न्यू क्यारिज्म्याटिक्स् प्रथम संस्करण, पृष्ठ २)।
बाइबलीय जवाफ रोमी ८:९ मा पाइन्छ, “तर साँच्चै परमेश्वरका __________ ___________भित्र ___________ गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू शरीरमा छैनौ, तर आत्मामा छौ। तर कुनै मानिससँग ख्रीष्टका __________ हुनुहुन्न भने त्यो उहाँको होइन।”
यदि कुनै व्यक्तिसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भने त्यो व्यक्ति उहाँको होइन। ऊ ख्रीष्टको होइन। ऊ एक ख्रीष्टियन होइन। यदि म मुक्ति पाएको व्यक्ति हुँ भने मसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। म यो कसरी जान्दछु? म यो जान्दछु, किनभने परमेश्वले सो भन्नुभएको छ। ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने प्रत्येकले पवित्र आत्मा पाइसकेका हुन्छन् (यूहन्ना ७:३९)। पावल भन्छन्, “हामी_______ पवित्र आत्मा वास गर्नुहुन्छ” (२ तिमोथी १:१४) अनि यो कुरा परमेश्वरको रगतले किनिएको हरेक जनको सम्बन्धमा साँचो हुन्छ। परमेश्वरको परिभाषा (१ कोरिन्थी ६:१९, रोमी ८:९, यूहन्ना ७:३९ आदि) अनुसार ख्रीष्टियन भनेको त्यो व्यक्ति हो जसभित्र पवित्र आत्माले वास गर्नुहुन्छ अर्थात् जसले पवित्र आत्मा पाइसकेको हुन्छ। विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएको हुनु तर पवित्र आत्मा नपाएको हुनु असम्भव कुरा हो। पवित्र आत्माको प्राप्तिि र उहाँको हामीभित्रको उपस्थिति कुनै आत्मगत (subjective) र शंकास्पद अनुभवमा आधारित छैन। यो त परमेश्वरको वचनको स्पष्ट अभिव्यक्तिहरूमा आधारित छ।
• तपाईंले पापहरूका पूर्ण क्षमा पाउनुभयो (एफेसी १:७)
• तपाईं ख्रीष्टको शरीरको एउटा अङ्ग बन्नुभयो (१ कोरिन्थी १२:१३)
• तपाईं परमेश्वरको परिवारको एउटा सदस्य बन्नुभयो (यूहन्ना १:१२)
• तपाईंले अनन्त जीवनको वरदान पाउनुभयो (१ यूहन्ना ५:११-१२)
• अनि अरू थुप्रै कुराहरू पाउनुभयो!!
हामीले पवित्र आत्मालाई मुक्ति पाएकै घडीमा पाउँछौं कि मुक्ति पाएको केही समय पछि पाउँछौं? रोमी ५:५ मा यसको जवाफ पाइन्छ — “अनि आशाले चाहिँ शर्ममा पर्न दिँदैन किनभने हामीलाई दिइनुभएको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रा हृदयहरूमा खन्याइएको छ।” यस पद अनुसार, पवित्र आत्मा हामीलाई कुन घडीमा दिइनुभएको थियो?
हाम्रा क्यारिज्म्याटिक मित्रहरू “फुल गस्पेल” (पूर्ण सुसमाचार) को प्रायः कुरा गर्छन्। उहाँहरूको विचारमा अरूहरूको सुसमाचार अपूर्ण छ — “केवल ख्रीष्ट र क्रूसको प्रचार पर्याप्त) छैन। ख्रीष्टमा सरल रूपमा मुक्ति पाउनु पर्याप्ता होइन। तपाईंहरूलाई अझ अरू कुराको आवश्यकता छ। तपाईंहरूले अन्य भाषा बोल्ने आदि जस्ता पेन्टेकोस्टको अनुभव पाउन खाँचो छ।” तर यस्तो भनाइलाई १ कोरिन्थी २:२ सित तुलना गर्नुहोस्।
येशू ख्रीष्टमा पाइने मुक्ति एक पूर्ण र सिद्ध मुक्ति हो। ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्दा एउटा व्यक्तिले ख्रीष्टको साथ-साथ पाइने सबै कुराहरू प्राप्त गर्दछ। “उहाँले आफ्नै पुत्रलाई पनि बाँकी राख्नु्भएन, तर हामी सबका निम्ति उहाँलाई अर्पिदिनुभयो त कसरी उहाँले उहाँको साथमा ________ _____________ पनि हामीलाई सित्तैमा दिनुहुनेछैन र (रोमी ८:३२)?” ख्रीष्टियन जीवन जिउने चाबी थप वरदान र आशिषहरू पाउन खोज्नु होइन। ख्रीष्टियन जीवनको चाबी त ख्रीष्टमा बढ्दै जानु र उहाँमा हामीलाई सित्तैंमा दिइएका कुराहरू पत्ता लगाउँदै जानु हो। ख्रीष्टियन जीवनको चाबी त हामी ख्रीष्टमा कति धनाढ्य छौं भनेर सिक्नु हो। आत्मिक करोडपतिहरू भएर पनि प्रायः जसो ख्रीष्टियनहरूले सो कुरा जानेका छैनन्।
“हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिता धन्य होऊन्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा __________ आत्मिक आशिषहरूले ख्रीष्टमा आशिषित पार्नुभएको छ” (एफेसी १:३)।
विश्वासीहरू कत्तिको आशिषवान् पारिएका छन्? ख्रीष्ट गरिब बन्नुभयो, उहाँमा हामी धनवान् बन्न सकौं भनेर (२ कोरिन्थी ८:९)। पवलले आत्मिक समस्याहरूले जेलिएका कोरिन्थीहरूलाई यसरी लेख्ना सके, “हरेक कुरामा तिमीहरू उहाँद्वारा धनवान् बनाइएका छौ यसैकारण कुनै पनि अनुग्रहको वरदानमा तिमीहरू कम छैनौ” (१ कोरिन्थी १:५,७)।
आफूले पवित्र आत्मा पाउनुभएको प्रमाण तपाईं कसरी दिनुहुन्छ? हाम्रा क्यारिज्म्याटिक मित्रहरूले आफूहरूले अन्य भाषामा बोलेका (“आत्माको बप्ति्स्मा”) कुरालाई पवित्र आत्मा पाएको प्रमाणस्वरूप औंल्याउँछन्।
“तर _____________ ________ हो: प्रेम, आनन्द, शान्ति, सहनशीलता, कृपा, भलाइ, विश्वास, नम्रता, संयम” (गलाती ५:२२)।
“किनकि परमेश्वरको इच्छा यही हो — तिमीहरूको पवित्रता। तिमीहरू व्यभिचारबाट अलग बस…किनकि परमेश्वरले हामीलाई अशुद्धताका निम्ति होइन, तर __________का निम्ति बोलाउनुभएको छ। यसकारण जसले यस कुरालाई तुच्छ ठान्छ, त्यसले मानिसलाई होइन, तर परेमेश्वरलाई तुच्छ ठान्छ, जसले हामीलाई आफ्ना पवित्र ___________ पनि दिनुभएको छ” (१ थेस्सलोनिकी ४:३,७,८)।
“अनि परमेश्वरका ___________ आत्मालाई शोकित नपार, जसद्वारा तिमीहरू छुटकाराको दिनका निम्ति छाप मारिएका छौ” (एफेसी ४:३०)। यदि तपाईंले पवित्र आत्मालाई पाउनुभएको छ र परमेश्वरको सन्तान बन्नुभएको छ भने, आफू प्रभुको अनाज्ञाकारी बन्न पुग्दा र उहाँलाई मन नपर्ने काम गर्न पुग्दा तपाईंलाई कस्तो अनुभव हुन्छ? के तपाईंलाई अप्ठेरो महसुस हुँदैन, दोष महसुस हुँदैन, अशान्ति हुँदैन? २ पत्रुस २:७-८ मा बयान गरिएको धर्मी लूतको अवस्थासित तुलना गर्नुहोस्। विश्वासीभित्र वास गर्नुहुने पवित्र आत्माले विश्वासीलाई आफ्नो शोकित उपस्थितिको महसुस दिलाउने काम गर्नुहुन्छ। पापमय जीवन बिताउने व्यक्ति, जसले आफू पापमय जीवन बिताइरहेछु भनेर जान्दछ र त्यसरी नै जिउन रमाउँदछ र त्यहीअनुसारको पापमय जीवन बिताइरहने अभिप्राय राख्दछ, उसभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्न। पापमा जिउन उसलाई कुनै अप्ठेरो नलाग्नु नै पवित्र आत्मा उसभित्र उपस्थित हुनुहुन्न भन्ने कुराको प्रमाण हो। [R.Gene Reynolds, Assurance of Salvation, page 73]
“विलियम समारिन, टोरोन्टो युनिभर्सिटीका भाषाविज्ञानका प्राध्यापक लेख्नुरहुन्छ:
‘पाँच वर्षको अवधि लगाएर मैले इटाली, हल्याण्ड, जमाइका, क्यानडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाका सभाहरूमा भाग लिएको छु। मैले पुरानो खाले पेन्टेकोस्टलहरू र नयाँ खाले पेन्टेकोस्टलहरूको अवलोकन गरेको छु। म निजी घरहरूमा हुने साना जमघटहरूमा पुगेको छु साथै बडेमाका सार्वजनिक सभाहरूमा पुगेको छु। मैले [न्यूयोर्कस्थित] ब्रङ्क्सका प्वेर्टो-रिकनहरू, आपलेचियनहरूका सर्प खेलाउनेहरू र लस-एन्जलसका रूसी मलाकन्सहरू जस्ता फरक-फरक संस्कृतिहरूका बीचमा पुगेको छु…मैले अन्य भाषा बोल्नेहरूसित अन्तर्वार्ता लिएको छु र अन्य भाषाको असंख्य नमुनाहरू रेकर्ड गरेको छु र तिनका विश्लेषण गरेको छु। हरेकमै ग्लोसोलेलिया [अन्य भाषा] भाषा विज्ञानको दृष्टिकोणमा अर्थहीन भेटियो। सतहमा मिल्दोजुल्दो रूप भए तापनि ग्लोसोलेलिया वास्तवमा भाषा होइन।'” (द क्यारिज्म्याटिक्स्, पृष्ठ १६२ मा जन म्याकआर्थरद्वारा उद्धृत)।
यी कथित “अन्य भाषाहरू” त बाइबलका पन्नाहरूमा वर्णित अन्य भाषाहरू भन्दा ज्यादै फरक छन्। यस बारेमा चाबी खण्डचाहिँ प्रेरित अध्याय २ मा पाइन्छ जहाँ अन्य भाषाहरूको वरदानको पहिलो ऐतिहासिक प्रयोगको बयान छ। पेन्टेकोस्टको त्यस दिनमा के बोलिएका थिए त? यो निर्विवाद छ, त्यस दिन वास्तविक भाषाहरू नै बोलिएका थिए:
“तर जब त्यो आवाज भयो, तब एउटा भीड भेला भयो, र ती छक्कै परे; किनकि हरेक मानिसले उसको आफ्नै भा_________ तिनीहरूलाई बोलिरहेका सुन्यो…अनि कसरी हामीमध्ये हरेकले जुन भाषामा हामी जन्म्यौं, त्यसैमा बोलेको सुन्दैछौं ता?” (प्रेरित २:६,८)।
१ कोरिन्थी १४:५,१३,२७,२८ मा हेर्नुहोस्। कुनै पनि विदेशी बोलीको अर्थ यदि बुझिने हो भने त्यसलाई अनुवाद गरिनुपर्दछ। त्यसैले त संयुक्त राष्ट्र संघका अधिवेशनहरूमा दोभाषेहरू (interpreters) प्रयोग गरिन्छन्। यी निपुण अनुवादकहरूले भाषाको रूपान्तर गरिदिएर विभिन्न राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूलाई निजहरूले नबुझ्ने भाषामा बोलिएका कुरा बुझ्नलाई सेवा पुर्याभउँछन्। मत्ती १:२३ मा “अर्थ” (interpretation) को माने “अनुवाद” हो भनेर देख्नत सकिन्छ (हिब्रूमा “इम्मानुएल” लाई नेपालीमा “परमेश्वर हामीसित” भनेर अनुवाद गरिन्छ)।
१ कोरिन्थी १४:१९ मा पढ्नुहोस् — “तरै पनि मण्डलीमा अन्य भाषामा दस हजार शब्दबोल्नुभन्दा ता बरु अरूलाई पनि सिकाउन सकूँ भनेर आफ्नो समझले _____________ ___________ बोल्नु नै म चाहन्छु।” यस पदले ज्यादै स्पष्ट देखाउँछ कि अन्य भाषाहरूको वरदानमा “शब्द” हुन्थे। शब्द के हुन् त? अर्थ बोकेका स्वर हुन् ती। ती अर्थ बोक्ने माध्यम हुन् जसद्वारा हामी एक-अर्कासँग संवाद गर्दछौं। बाइबलमा अन्य भाषाहरू कुनै उत्तेजित उच्चारणहरू थिएनन्, ती त शब्दहरू थिए। अर्थहीन आवाज थिएनन् ती, ती त शब्दहरू थिए। अर्थ नभएक बकबक थिएनन् ती, ती त शब्दहरू थिए। उत्तेजित उच्चारणहरू थिएनन् ती, ती त अर्थपूर्ण उच्चारणहरू थिए।
१ कोरिन्थी १२:४-११ बाट हामी यो सिक्छौं हरेक विश्वासी जनसित एक न एक आत्मिक वरदान हुन्छ तर हरेक विश्वासीको वरदान एउटै हुँदैन। केही विश्वासीहरूसित अन्य भाषाहरूको दान थियो (पद १०) तर सबैसित होइन। १ कोरिन्थी १२:३० मा प्रश्नर गरिएको छ, “के सबैले विभिन्न भाषाहरू बोल्छन्?” यो यस्तो खाले प्रश्न। हो जसले नकारात्मक जवाफको माग गर्दछ। यसलाई नेपालीमा यसरी अनुवाद गर्न सकिन्छ, “के सबैले विभिन्न भाषाहरू बोल्छन् र?” यसको जवाफ हुन्छ, “बोल्दैनन्!” सबैले नै अन्य भाषाहरूमा बोल्दैनन्। यो दान कतिसित थियो तर सबैसित थिएन। यसर्थ के नयाँ नियमको समयमा अन्य भाषाहरूको वरदान हरेक विश्वासीलाई दिइन्थ्यो? _______
त्यस्तो आज्ञा कतै छ त? “पवित्र आत्माले ____________ होओ” (एफेसी ५:१८) भन्ने आज्ञा त छ। “आत्मामा _______” (गलाती ५:१६) भन्ने आज्ञा त छ। तर अन्य भाषाहरूमा बोल्नका लागि भने कतै आज्ञा दिइएको पाइँदैन। त्यस्तो आज्ञा कतै भेटिएला भन्ने आशा गर्न पनि मिल्दैन। किनभने जुन काम गर्न सकोस् भनेर परमेश्वरले कसै-कसैलाई मात्र क्षमता दिनुभयो, त्यही काम गरोस् भनेर उहाँले सबै विश्वासीहरूलाई कसरी आज्ञा गर्नुहुन्थ्यो र?
“म मेरा परमेश्व्रलाई धन्यवाद चढाउँछु — तिमीहरू सबैभन्दा बढी म भाषाहरू बोल्दछु; तरै पनि मण्डलीमा अन्य भाषामा ______ ___________ शब्द बोल्नुभन्दा ता बरु अरूलाई पनि सिकाउन सकूँ भनेर आफ्नो समझले ______________ शब्द बोल्न नै म चाहन्छु” (१ कोरिन्थी १४:१८-१९)।
१ कोरिन्थी १४ मा पावलले अन्य भाषाको वरदान भन्दा भविष्यवाणीको वरदान बढी मूल्यवान रहेको बताउँछन् (१-५ पदहरू पढ्नुहोस्)। पावलले १ कोरिन्थी १२:२८ मा केही वरदानहरूलाई तिनका तुलनात्मक महत्त्वको आधारमा सूचीत गरेको देखिन्छ: “अनि परमरेश्वरले मण्डलीमा कतिलाई नियुक्त गर्नुभएको छ: पहिलो प्रेरितहरू, दोस्रो भविष्यवक्ताहरू, तेश्रो शिक्षकहरू; त्यसपछि सामर्थ्यका कामहरू, तब निको पार्ने वरदानहरू, सहायताहरू, अगुवाइ गर्ने कामहरू र किसिम-किसिमका भाषाहरू।” यस सूचीको अन्त्यमा कुनचाहिँ वरदानको उल्लेख गरिएको छ?_____________________
२) “अन्य भाषाको वरदान मण्डली इतिहासको शुरूतिर अन्त भयो, सम्भवत: पहिलो शताब्दीको अन्ततिर। तरैपनि आजका आखिरी दिनहरूमा अन्य भाषाहरूको वरदान फेरि प्रकट भएको छ र परमेश्वरले फेरि पनि यस वरदानलाई दिँदैहुनुहुन्छ।” बाइबलीय जवाफ:
“प्रेम कहिल्यै टल्दैन। तर चाहे भविष्यवाणीहरू होऊन्, ती बितेर जानेछन्; चाहे भाषाहरू होऊन्, ती ______________ हुनेछन्; चाहे ज्ञान होस्, त्यो बितेर जानेछ” (१ कोरिन्थी १३:८)।
अन्य भाषाहरूको वरदान बन्द हुनेछन् भनी पावलले भविष्यवाणी गरे। यसको मतलव परमेश्वरले अन्य भाषाहरूको वरदान दिने कामलाई रोक्नुहुनेछ। समस्या के छ भने पावलले यस पदमा अन्य भाषाहरू कहिले बन्द हुनेछन् भनेर बताएनन्। उनले “अन्य भाषाहरू ७० एडीमा बन्द हुनेछन्” भनेनन्। उनले “अन्य भाषाहरू १००० वर्ष पछाडि बन्द हुनेछन्” भनेनन् वा उनले “अन्य भाषाहरू प्रभुको दोस्रो आगमनमा बन्द हुनेछन्” भनेनन्।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 22:23:472020-04-28 14:24:33भाषाहरूको वरदान
हामीले मानिस कुन बेला शरिरद्वारा चलाइएको छ भनेर पनि पहिचान गर्न सक्नुपर्छ भनी बाइबलले स्पष्ट गर्दछ। गलाती ५:१९ ले भन्छ, “अब _____________ ______________ प्रकट छन्…।” “प्रकट” शब्दको अर्थ हो “देख्न मिल्ने गरी खोलिएको, दृश्यमान, प्रत्यक्ष।” यदि कोही मानिस शरीरमा हिँडिरहेको छ भने, तपाईंले त्यो सजिलै ठम्याउन सक्नुपर्छ। यो स्पष्ट देख्न सकिने कुरा हो। यो त फोहोर कपडालाई सबैले देख्ने गरी झुण्ड्याइएको जस्तै हो।
परमेश्वरले अधीनतामा सुम्पने हृदय खोजिरहनुभएको छ। हरेक विश्वासीले आफूलाई उहाँको अधीनतामा सुम्पिनुपर्छ। श्रीमतीहरूले आफूलाई आफ्ना श्रीमानको अधीनतामा सम्पिनुपर्छ। नानीहरूले आफूलाई आफ्ना बाबुआमाहरूको अधीनतामा सुम्पनुपर्छ। दासहरूले आफूलाई आफ्ना मालिकको अधीनतामा सुम्पनुपर्छ। आत्माले भरिएको र अधीनतामा सुम्पने विश्वासीलाई भेट्न मैले कहाँ हेर्नुपर्छ? शनिबारको मण्डली सभामा होइन जब सबैजनाले आफ्नो सर्वोत्कृष्ट व्यवहार देखाउन खोजिरहेका हुन्छन्। क्यारिज्म्याटिक स्तुति प्रशंसाको भागमा होइन जब सबैजना आत्मिक रूपले उच्च भएको जस्तो देखिन्छ। मूल्याङ्कन गर्ने सर्वोत्तम तरिका भनेको हप्ताभरि एउटा विश्वासी जहाँ-जहाँ हुन्छ, त्यहीँ हर्नु हो। उदाहरणको निम्ति: मालिकको दिन खराब चलिरहेको बेलामा विश्वासी कामदारले कस्तो प्रतिकृया देखाउँछ? जब दिनभरीको लामो र गाह्रो काम सिद्धाएर श्रीमान घरमा आइपुग्छन्, तब आफ्नो श्रीमती र नानीहरूसँग व्यवहार गर्दा के उनी पवित्र आत्माको प्रभाव र अधिकार मुनि रहेको देख्न सकिन्छ? श्रीमती पनि, नानीहरूसँग चुनौतीपूर्ण दिन बिताएपछि, जब तिनी पूरै थकित हुन्छिन्, र तिनको श्रीमान ठूस्स मुद्रामा घर आउँछन् र खानाको बारेमा गनगन गर्छन्, तब श्रीमतीले कस्तो व्यवहार गर्छिन्? के उनी सहनशील हुन्छिन् (“आत्माको फल हो…सहनशीलता) वा उनी कुनै पहाड पड्के जस्तो पड्किन्छिन्? त्यसैले आत्माले भरिएको कुरा देखिने ठाउँचाहिँ घर, कार्यालय हो।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 22:12:172020-04-28 14:24:32११ आत्माले भरिनुका परिणामहरू के के हुन्?